ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး၊အာစီယန်၊အိုအိုင်စီ၊နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက.မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ ဗမာစစ်တပ် နဲ့ အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းများကို ဝိုင်းဝန်းထိန်းကျောင်း ပဲ့ပြင်ပေး ကြရမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်- သို့မဟုတ်ရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံက နောက်ထပ် အစုလိုက်အပြုံ လိုက် ထွက်ပြေးလာကြမဲ့ ဒုက္ခသည် တွေအတွက် လိုအပ်လာမဲ့ အစီအမံများသာ လုပ်ဆောင်ထားကြပါတော့… | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး၊အာစီယန်၊အိုအိုင်စီ၊နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက.မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ ဗမာစစ်တပ် နဲ့ အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းများကို ဝိုင်းဝန်းထိန်းကျောင်း ပဲ့ပြင်ပေး ကြရမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်- သို့မဟုတ်ရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံက နောက်ထပ် အစုလိုက်အပြုံ လိုက် ထွက်ပြေးလာကြမဲ့ ဒုက္ခသည် တွေအတွက် လိုအပ်လာမဲ့ အစီအမံများသာ လုပ်ဆောင်ထားကြပါတော့…
ဆရာဦးကိုနီ အသက်ပေးခဲ့ရပါတယ်….၂၅/၂/၂၀၁၇ ရက် ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး
က…ဦးကိုနီအသတ်ခံရခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး…Victum blame လုပ်တဲ့စကားအဖြစ်
ဦးကိုနီကို အပြစ်တင်စကားပြောသွားခဲ့တာကို သတိပြု မိလိုက်ပါတယ်…
“မွတ်စလင်တွေက နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းရှိလို့….လွှတ်တော်ကိုယ်စား
လှယ် ၆၆ နေရာလောက်ရနိုင်တယ်” ……ဆိုတဲ့ ဦးကိုနီရဲ့ ပြောစကားဟာ…..
စစ်တပ် စိတ်တိုင်းကျရေးထားတဲ့ ၂၀၀၈ (နာဂစ်)ဖွဲ့စည်ပုံ အခြေခံဥပဒေက ပေး
အပ်ထားတဲ့…နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို ရှင်းလင်း တင်ပြတာသာဖြစ်ပါတယ်….
ဆရာဦးကိုနီဟာ ပြည်တွင်း/ပြည်ပခရီးတွေအများကြီးသွားခဲ့သူတယာက်ပါ…
ဆရာဟာ ရောက်လေရာအရပ်မှာ မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေဆုံပြီး
ဥပဒေရေးရာအသိပညာတွေကို ဖြန့်ဝေဟောပြောမှုတွေ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်…
လူမျိုးစုံ/ဘာသာစုံကို ဥပဒေရေးရာတွေကို ဟောပြောတဲ့နေရာမှာ ရဲရဲဝန့်ဝန့်
တာ တခုမှမရှိသလို…..ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွား ထိခိုက်အောင်
ဥပဒေရေးရာတွေကို သူကိုယ်တိုင်အကြံပေးနေရတဲ့ NLD ပါတီက….သူကိုယ်တိုင်
အဆိုပြု ခဲ့တဲ့….မွတ်စလင်အမတ် ၂ နေရာကို….နောက်ဆုံးအချိ န်ရောက်မှ…
ဗဟိုဦးစီးအမိန့်အာဏာနဲ့ ဖြု တ်ပစ်လိုက်ပြီးတော့ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ပထမဦးဆုံး
မွတ်စလင်အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ တွေတဲ့အခါတိုင်း…အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး….
လူမျိုးခြား/ဘာသာခြားတွေနဲ့ သဟဇာတဖြစ်စွာနေထိုင်ကြဖို့…အခြားဘာသာ
ဝင်များက အထင်အမြင်လွဲမှားမှုဖြစ်စေမဲ့ အမူအကျင့်တွေ အလေ့အထတွေကို
ရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ လမ်းညွှန်လေ့ အကြံပေးလေ့ရှိပါတယ်….
အခုတော့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်က…ဆရာဦးကိုနီရဲ့အဲ့ဒီ..”မွတ်စလင်တွေက နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းရှိလို့….လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၆၆ နေရာ လောက်ရနိုင်တယ်” …ဆိုတဲ့စကားကိုပြောခဲ့လို့…..မျိုးချစ်စိတ်
အစွန်းရောက်တဲ့ အငြိမ်းစားတပ်မတော်အရာရှိ(လူငယ်) တွေက ဒေါသထွက်
ပြီး….မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတာ….လို့ ပြောသွားတာဟာ….အလွန်အင်
မတန် အောက်တန်းကျတဲ့ လူမျိုးရေးဘာသာရေး ခွဲခြားမှုသာဖြစ်ပါတယ်….
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များဟာ ဘာသာရေးလူမျိုးရေး
ခွဲခြားမှုတွေကို နေရာပေါင်းစုံမှာ ခံစားပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ ရပ်တည်နေထိုင်ကြရ
မြန်မာမွတ်စလင်တွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ…အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတဲ့ လုပ်ငန်း
ရေး ထုံးတမ်းစဉ်လာ အခန်းအနားတွေလုပ်တဲ့နေရာ…ဘာသာရေး စာပေသင်
နေရာ………..အစရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာ…..ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့ ရင့်သီးမှုတွေကို ခံရသလို…၉၆၉/ မဘသ / မျိုးချစ် လို့
အမည်ပေါင်းစုံ ပြောင်းလဲမှည့်ခေါ်တတ်တဲ့ ဘုန်းကြီးတု/ဘုန်းကြီးစစ် တွေရဲ့….
တွေကို ခံစားနေကြရတာ…နေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်ပါတယ်….
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အုပ်ချု ပ်နေတဲ့ အစိုးရ ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့…အဲ့ဒီ အစိုးရဟာ စစ်တပ်
ကိုအမိန့်ပေးခွင့်မရှိသလို…..ရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလဲ အစိုးရရဲ့ ထိန်းချု ပ်ကွပ်ကဲ
အထူးသဖြင့် မြန်မာမွတ်စလင်တွေကို ဥပဒေနဲ့အညီ အကာအကွယ်ပေးမဲ့သူ
မရှိတဲ့အပြင်………….ရဲတပ်ဖွဲ့က ဘုန်းကြီးတွေညွှန်ကြားတဲ့ အတိုင်း ပြောင်းပြန်
မြန်မာမွတ်စလင်တွေကို နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ် ထုတ်ယူလို့မရအောင်…ခက်ခဲ
အောင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမျိုးစုံတီထွင် တင်းကြပ်ထားပါတယ်….NVC ဆိုတဲ့
အလိမ်အညာစကားတွေနဲ့ အမွှန်းတင်ထားတဲ့ အစားထိုးကဒ်ပြားကို မယူမနေရ
ပုံစံမျိုးနဲ့ ဇွတ်ပေးပြီး နိုင်ငံမဲ့တွေ ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နေပါတယ်…..
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကို လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်နေသလိုမျိုး
ပြည်တွင်းမှာ မြန်မာမွတ်စလင်များအပေါ် လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ဖို့
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလဲ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေဟာ…ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကြောင့်
လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ် ရှင်းလင်းခြင်းခံနေကြရတာပါ…..
ဒီကနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံက မြန်မာစကားမပြောတတ်တဲ့
ဘင်္ဂလီတွေကို ခေါ်ယူအခြေချနေစေပြီး ထောက်ပံ့မှု မျိုးစုံပေးနေတာဟာ….
သူတို့က ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင်တွေဖြစ်ကြလို့ပါ…
မြန်မာမွတ်စလင် ဥပဒေပညာရှင် ဆရာဦးကိုနီကို လူစည်ကားရာ နိုင်ငံတကာ
လေဆိပ်ကြီးမှာ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်
လိုက်ပြီးတဲ့နောက် လူသတ်မှုကို နောက်ကွယ်က စီစဉ်ဖန်တီးသူတွေကို ဖော်
ထုတ်လို့မရအောင် …ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဘဲ အကာအကွယ်ပေးလိုက်ကြ
ဒီ ကိစ္စတွေအားလုံးကို ဗမာစစ်တပ်နဲ့ ပတ်သက်သူတွေ/ ဗမာစစ်တပ်ရဲ့လက်
အောက်ခံ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ပူးပေါင်း လုပ်ခဲ့ကြတာပါ
ဒီ ဖြစ်စဉ်…ဒီလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးဟာ…မြန်မာမွတ်စလင်တွေကို နှိပ်ကွတ်မှုတွေ
ပြုလုပ်နေတာတွေကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်လိုက်တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်…
မြန်မာမွတ်စလင်တွေရဲ့အခြေအနေကို နားလည်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ရှိတဲ့…
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချို့ကတောင် စိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ပြီး….မြန်မာမွတ်စလင်တွေ ကို…တိုင်းပြည်က စွန့်ခွာသွားကြဖို့ တိုက်တွန်းမှုတွေ ရှိလာနေပါပြီ….
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင် ၁၀သန်းကျော်မှာ…ရိုဟင်ဂျာ ၃သန်းကျော်
ကျော်…၄သန်းလောက်ကို ထုတ်လိုက်ရင်တောင် ပြည်တွင်းနေ မြန်မာမွတ်စ
လင်တွေက လူများစု ဖြစ်နေပါတယ်…
ပြည်တွင်းမှာ နောက်ထပ်ဖိနှိပ်ချု ပ်ချယ်မှုတွေ ထပ်ဖြစ်လာလို့ ပြည်တွင်းက
မွတ်စလင်တွေပါ နိုင်ငံစွန့်ခွာထွက်ပြေးလာကြရတယ်ဆိုရင်….UNHCR အဖွဲ့ကြီး
နဲ့ ….အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံတွေမှာ ….အလုပ်တွေရှုပ်ကြရပါတော့မယ်….
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ လက်ရှိနိုင်ငံစွန့်ခွာလာရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေထက် မြောက်
များလှစွာသော အရေအတွက်ရှိတဲ့လူတွေ ရောက်လာကြမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ပါ
နိူင်ငံတကာ အတွက်လဲ ပေးကမ်းထောက်ပံ့ရမှုတွေ…ရာဇဝတ်မှုနှိမ်နင်းရမှုတွေ
အများကြီးတာဝန်ပိုလာနိုင်ပါတယ်…..
ဒီအဖြစ်အပျက်ဆိုး…ကပ်ဆိုးကြီးဟာ…..နိုင်ငံတကာရဲ့ ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်မှုနဲ့
အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက….မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ ဗမာစစ်တပ် နဲ့
အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းများကို ဝိုင်းဝန်းထိန်းကျောင်း ပဲ့ပြင်ပေး
မြန်မာနိုင်ငံက နောက်ထပ် အစုလိုက်အပြုံ လိုက် ထွက်ပြေးလာကြမဲ့ ဒုက္ခသည်
တွေအတွက် လိုအပ်လာမဲ့ အစီအမံများသာ လုပ်ဆောင်ထားကြပါတော့……
ပိုမို ဆိုးယွားတဲ့ အခြေအနေတွေ…တဖြည်ဖြည်း ရောက်ရှိလာနေပါပြီ….ဆိုတာ
← Myanmar extremist Monk Wirathu cheers hate crime and compares with Buddhist tale
UN and ICC should close shop if they dare not or do not wish to take action on Myanmar leaders and extremist Ma Ba Tha monks →